NELSON MANDELA OO GERIYOODAY | sowora
← Dowladdu Waxay Hirgelin doontaa Isbitaal gaar ah oo lagula tacaalo haweenka la kufsado” (SAWIRRO)
UNHCR chief meets Pope Francis to discuss refugee issues →
NELSON MANDELA OO GERIYOODAY
Posted on December 6, 2013	by sowora
Madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika ayaa habeenimadii xalay ku geeriyoodey gurigiisa ku yaala magaalada Johannesburg ee dalaka Koonfur Afrika, sidaas waxaa sheegey Madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma. Mandela ayaa da’diisu ahayd 95 jir.
Mandelaa ayaa muddo dheer xanuun ka hayey sanbabada.
Mandela ayaa ahaa madaxweynihii u horeeeyey ee Madow ah ee dalka Koonfur Afrika waxaana xilka loo doortey 1994 isaga oo hayey tan iyo sanadkii 1999.
Nelson Mandela ayaa calaamad u ahaa xornimo u dirirka, waxaana uu ahaa nin aad loo jecel yaha isaga oo heley in ka badan 250 abaalmarinood, waxaana ka mid ahaa abaal marinta nabadda oo uu heley sanadkii 1993.
Kadib markii la shaaciyey dhimashada Nelson Mandela ayaa kumaankun qof ku yimaadeen halka uu gurigiisu ku yaalo, kuwaas oo dhigaayey ubaxyo iyo Shumacyo shidan, waxaana ay xurmo iyo tiiraanyo ka muujinayaan dhimashada Nelson Mandela.
Waxa uu ku dhashay Rolihlahla Dalibhunga 1918, qabiilka Madiba ee ku hadla Xhosa oo ah dadka Thembu ee dega tuulo yar oo ku taal bariga Cape ee Koonfur Afrika.
Koonfur Afrika gudaheeda waxaa inta badan loogu yeeri jiray magaca qabiilkiisa ee Madiba halka uu bixiyay magaciisa Ingiriiska ah ee Nelson, macalin iskuulka u dhigi jiray.
Waxa uu guursaday xaaskiisi ugu horreysay Evelyn Mase, 1944. Waxa ay is fureen 1985 kadib markii afar caruur ah isku dhaleen.
Mandela waxa uu bartay sharciga, waxaana uu 1952 xafiis qareen ka furtay Johannesburg isaga iyo saaxiibkii Oliver Tambo.
“waxaan difaacayaa aragtida dimuqraadiyadda iyo bulsho xor ah taasi oo dhammaan dadku ay ku wada nool yihiin heshiis iyo fursado loo siman yahay,” Ayuu yiri.
“Waa aragti aan rajeynayo inaan ku noolaado oo aan helo. Laakiin haddii loo baahdo, waa aragti aan diyaar u ahay inaan u dhinto.”
Dhammaadkii 1964 ayaa lagu xukumay xabsi daa’in.
Boqolaal ayaa la dilay, iyadoo kumanaan la dhaawacay ka hor inta aan kacdoonka baabi’in.
Dhibaatada ugu horreysay ee soo wajahday waxay ahayd guryo la’aanta heysatay dadka saboolka ah, xaafadaha isku raranka ah ayaa sii socday oo dhibaato ku ahaa magaalooyinka waaweyn.
Sanad-guurada 80aad ee dhalashadiisa, 1998, Mr Mandela waxa uu guursaday Graca Machel, oo ah haweeneydii uu ka dhintay Madaxweynihii hore ee Mozambique.
Markii uu xilka Madaxweynenimada ka degay 1999, in meelaha banaanka lagu arko waxa ay inta badan la xiriirtay hawsha hey’addiisa Mandela, oo ah hey’ad samafal oo uu aasaasay, laakiin waxa uu sii waday in uu dibedda u safro, in uu la kulmo hoggaamiyeyaal, in uu ka qeybgalo shirarka waaweyn iyo inuu abaalmarinno qaato.
Sanad-guurada 89aad ee dhalashadiisa, wuxuu sameeyay koox loogu magac dara Odoyaasha oo ka kooban xubno dunida caan ka ah si ay u bixiyaan talo iyo tusaalooyin “si wax logga qabto dhibaatooyinka ugu daran ee caalamka”.